Ma ogtahay in dumarku aysan ku biyo-bixin galmada? | Raganimo University
Ma ogtahay in dumarku aysan ku biyo-bixin galmada?
Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in dumarka intooda badan aysan ku biyo-bixn galmada caadiga ah. Qiyaastii 70-90% dumarka ka qeyb-qaatay cilmi baarista ayaa sheegay in aysan waligood biyo bixin marka ay sameeyaan galmada caadiga ah. Dumarka kuma biyo-baxaan galmada guska oo keliya.
In gabadhu biyo-baxdo waxaa qeybta ugu weyn ka qaata kintirka. Marka gabadha loo galmoonayo ayaa dhaqdhaqaaqa iyo taabashada saameysa kintirka ay keentaa in ay biyo baxdo. Balse tani waxaa saameyn ku yeelan kara masaafada uu kintirku u jiro daloolka uu gusku marayo iyo cabirka guska ninka. Sidaa daraadeed ayaa dumar badan waxay ku biyo-baxaan marka iyagu ay ninka dusha ka fuulaan. Sababta ayaa ah in markaa afka hore ee kintirka uu taabanayo caloosha ninka.
Ragga qaar ayaa xitaa isticmaala gacmaha, isla marka ay socoto galmado iyagoo ku salaaxaya kintirka. Hadaba haddii aad doonayso in aad gacalisadaada u raaxayso oo ay biyo-baxdo, waxaa muhiim ah in aad xooga saarto sidii aad uga shaqaysiin lahayd kintorkeeda. Haddii aad isticmaali lahayd faraha, carabka ama haddii aad iyada dusha saari lahayd.